We Fight We Win. -- " More than Media ": လှံတစ်ချောင်းဖြင့် နှစ်ပြည်ထောင် ကယ်ခဲ့သူ ( ဂိုရှယ်လေး )
လှံတစ်ချောင်းဖြင့် နှစ်ပြည်ထောင် ကယ်ခဲ့သူ ( ဂိုရှယ်လေး )
လှံတစ်ချောင်းဖြင့် နှစ်ပြည်ထောင် ကယ်ခဲ့သူ
ရာဇ၀င်သမိုင်းများအား လေ့လာပါသော် မိမိတို့၏ မြန်မာမင်းလက်ထက်များတွင် အခြားတပါး တိုင်းပြည် နိုင်ငံများသို့ သွားရောက် လူပါးဝသည် ထိုးစစ်များ နယ်ချဲ့မှုများ အထင်းရှား ရှိသကဲ့သို့ မိမိတို့ တိုင်းပြည်သည်လည်း အခြားတိုင်းတစ်ပါးမှ စစ်ရေး နယ်ချဲ၍ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ရန် ကြံစည်မှုနှင့် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့သော သမိုင်း အထင်ရှားရှိခဲ့၏။ သို့ရာတွင် ထိုသို့ ဘုံလုံတလှည့်ငါးပျံတစ်လှည့်ဖြင့် စီးဆင်းခဲ့သော မြန်မာ့ရာဇ၀င် သမိုင်းဖြစ်ထဲတွင် တစ်ပါးနယ်ချဲ့မှုအား မိမိတစ်ကိုယ်စာ မကြည့်ပဲ မိမိ၏ အမိမြေပေါ်မှ အရာရာအားလုံး သတ္တ၀ါများအားလုံးနှင့် အဆိုပါ ဘူမိ နှင့် တွဲဖက်နေသော ဘာသာရေး နိုင်ငံရေး လူမျိုးရေး စသော အနာဂတ်တစ်ခုလုံးအား ခြုံငုံကြည့်၍ နှစ်ပြည်ထောင် ကျွန်စနစ်ဘောင်အတွင်းသို့ ရောက်ရှိသွားနိုင်သည့် အရေးအား မိမိ အစွမ်းဖြင့်ကယ်မရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သော သူရဲကောင်းကြီး တစ်ပါး အထင်ရှားရှိခဲ့သည်။
တကောင်းအား သိမ်းမိထားပြီး ဘုရင်အဖြစ် နန်းစည်းဇိမ်ခံစာနေသော တရုတ်ပြည်မကြီး၏ ပြည့်ရှင့် ဆွန်မင်းဘုရင်ကြီး၏ တူတော်သူမှ စစ်ရေးဖြင့် တိုင်းနိုင်ငံထမ်မံချဲထွင်ရန် ကြံဆခဲ့သည်။
၄င်းတွင် အလွန်ကြီးမားပြီး သန်မာသော လူသားစစ်ဘီလူးကြီး ဂါမဏိ(ကာမဏိ) ဆိုသော သူရဲကောင်းကြီး ရှိနေပြီး အဆိုပါ သူရဲကောင်း၏ အစွမ်းဖြင့် နောက်ထပ် တိုင်းနိုင်ငံအကျယ်ဝန်းအား မှန်းဆကာ ရတာနာပူရ အင်းဝသို့ထိတိုင် ဆင်း၍ စစ်ရေးဖြင့် သိမ်းပိုက်ရန်ကြံဆကာ အင်းဝသို့ စစ်သည်ငါးသောင်း ခြံရံလျက် ချီတက်လာခဲ့သည်။
အင်းဝဘုရင် မင်းခေါင်မှာ အဆိုပါ သတင်းအား ရသည့်နှင့်ပင် မြို့ရိုးများ ပို၍ ခိုင်ခံအောင် စစ်ဆေးစီမံပြီး အပြင်သို့ မထွက်ပဲ မြို့တွင်းမှပင် ခံစစ်ဖြင့် တိုက်ခိုက်ရန် ကြံဆတော်မူလျက် မြို့အား ပြင်ဆင် စောင့်ကြပ်နေခဲ့၏။
ထင်ထားသည့်အတိုင်း အချိန်ကာလတစ်ခုတွင် အဆိုပါ တကောင်းသို့ နယ်ချဲ့ထားသော တရုတ် စင့်မင်း ခေါ် (စိန့်မင်း)နှင့် စစ်သည်တပ်ဖွဲ့များ အင်းဝနားသို့ ရောင်လာခဲ့ကြလေ၏။ အင်းဝမြေသို့ ရောက်လာသော ၄င်း၏ တပ်များ ခရီးတလျောက် ချေချင်နှင့် လမ်းဖေါက်ခဲ့ကြရပြီး ရာသီဥတုအပါဝင် ကာလအချိန်အရ အတော်ပင် ခရီးပမ်းနေခဲ့ကြသည်။ သို့ကြေင့် အဆိုပါ တရုတ်နယ်ချဲ့ဘုရင်မှ ရာဇာသံ ပေးပို့၍ အကြောင်းနှစ်မျိုး အား တစ်မျိုးကို ရွေးချယ်ရန် သံတမန်စာဆင့်လာလေ၏။ ၄င်း၏ စာပါအချက်(၂)ချက်တွင်…
.(၁) လက်ရှိ အင်းဝဘုရင်နှင့်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးတို့သည် ပျူခေတ်မှ မွေးထုတ်ပေးလိုက်သော တရုတ်အနွယ်ဖွားဖြစ်ခဲ့သူ ပုဂံပြည့်ရှင်မင်း အနော်ရထာခေါ် (အနာရှန်)၏ ကျေးကျွန်များဖြစ်၍ ငါ့အား နန်းမြို့မှ ထွက်ကာ လာရောက်ဦးခိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
(၂) သို့မဟုတ်ပါက အင်းဝကျွန်စားခံဘုရင်ဆိုသူမှ သူရဲကောင်းတစ်ဦး ထုတ်နုတ်၍ ငါ၏ စစ်သူရဲကောင်းနှင့် စီးချင်းထိုးကာ အဆိုပါစီးချင်း ရှုံးလျင် ငါ့အား အင်းဝကို အသာတကြည် အပ်နှင်းပေးရမည်ဖြစ်ပြီး ငါ၏ သူ၇ဲကောင်းမှ စီးချင်းထိုးခုတ်မှုတွင် ရှုံးလျင် ငါနေထိုင်တော်မူသော နေရာတကောင်းသို့ လှည့်ပြန်မည်ဖြစ်ပြီး အင်းဝဘုရင်၏ အုပ်စိုးမှုနယ်အသီးသီးမှ လူတစ်ယောက် အိမ်တစ်လုံး တရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်မှ မသေစေရပါဟု ဖေါ်ပြပါရှိခဲ့သည်။
အင်းဝဘုရင် မင်းခေါင်မှ တရုတ်ဘုရင်၏ သံစာအား ရသည်နှင့် နေမထိ ထိုင်မထိ စိတ်မအေး ဖြစ်ရပြီး ဗေဒင်နက္ခတ ပု ဏ္ဏား များအပြင် ရဟန်းသံဃာများအပါဝင် မူးမတ်များဖြင့် အရေးပေါ်တိုင်ပင်တော်မူပြီး..အင်းဝ မြို့ရိုး အပြင်ဘက်တွင် စောင့်ဆိုင်းတပ်ချထားသော တရုတ်ဘုရင်ထံသို့ ညင်သာသွာ အကြောင်းပြထားသည့် သံစာပြန်၍ ပို့ခဲ့လေသည်။
သံစာ၏ အဆိုတွင် ….အဝေးမှ ခရီှးရှည်ချီလာသော ဘုရင်မင်းမြတ်နှင့် အခြံရံတပ်များ ခရီးပမ်းနေ၍ (၇)ရက်မျှ သက်တောင်သက်သာ အနားယူစေချင်ပြီး (ရ) ရက်မြောက်သော နေ့တွင် ဘုရင်မင်းပေးပို့သော သံစာအချက်နှစ်ခုမှ နံပါတ်(၂) အချက်အား ရွေးချယ်ကြောင်းနှင့် ဘုရင်မင်းမြတ်သည်လည်း မိမိ၏ သံစာအတိုင်း ကတိတည်ကြည်မှု ပြုပါရန် အကြောင်းပြန်၏။
ထိုနောက် အင်းဝ ဘုရင်မင်းခေါင်မှ အရေးပေါ်သူရဲကောင်း ရှာရတော့သည်။ အင်းဝ နေပြည်တော်အတွင်း အထောက်သားများ၏ ပေးပို့လာသော သတင်းများအရ တရုတ်ဘုရင်၏ စစ်သူရဲကောင်း ဂါမဏိ၏ အစွမ်းနှင့် အနေထားတို့မှ မိုးကြိုးသွားကြီးအား ထန်းလျက်နှင့် ကာရံတိုက်ခိုက်ရမည့် အချေနေမျိုးယူဆနေကြ၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မျှ ယခင်က ထောင်ထောင် ထောင်ထောင်ဖြင့် လက်စွမ်းပြနေကြသော ပါးကွက်သားများ စစ်သူရဲများ ခေါင်းမ၀ံ့ရဲကြတော့ပေ။
ထိုအချိန်တွင် စစ်ရှုံးလျင် အဘယ်အရပ်သို့ ပြေးရပါ့ဆိုသော စကားများဖြင့် အင်းဝနေပြည်ထဲတွင်းရှိ အကျဉ်းထောင်အား စောင့်ကြပ်နေကြသော ထောင်စောင့်များ တတွတ်တွတ်ဖြင့် ပြောဆိုနေသံအား အကျဉ်းကျနေသော သူရဲကောင်း သမိန်ဗရမ်း ကြားလေသည်။ ၄င်းတို့၏ ပြောဆိုမှုများထဲတွင် စီးချင်းထိုးဝံ့၍ နိုင်အောင် လုပ်နိုင်သူအား ရွှေနန်းရှင် ဧကရာဇ်မင်းခေါင်မှ မဟာဥကရာဇာဆိုသော နန်းစီးဇိမ် တစ်ဝက်ပေးမည်ဆိုသော မက်လုံးများလည်း ပါဝင်၍ အဆိပ်လူးထားသော ဒိန်ခဲအား မျိုချရမည့် အရေးကဲ့သို့ ပြောဆိုနေကြ၏။
ထိုစကားသံများကြောင့် အကျဉ်းသားဖြစ်သူ သူရဲကောင်း သမိန်ဗရမ်း၏ ဦးခေါင်းထဲတွင် အမျှော်မြင်ကြီးသော အရာ ပြေးဝင်လာလေသည်။
(၁)“အင်းဝ အပြင်ဘက်တွင် စောင့်ဆိုင်းနေ၍ မာန်ကြွကာ ဟန်ရေးပြနေသော တရုတ်စစ်အင်အားမှာ အတော်ပင်ကြီးမား၍ မည်သို့မျှ တစ်ဦးချင်း ဓား ကို ဓားခြင်း လှံကို လှံခြင်း ခံ၍ တိုက်နိုင်မည်မဟုတ်…
(၂) အင်းဝ ကျလျင် ငါ၏ အမိမြေ သာသနာထွန်းကားရာ စည်ပင်ရာ ပဲခူးသို့ချီတက်ရန် လမ်းစ မုခ်ဝလည်း ဖြစ်လာလေမည်
(၃) တစ်စုံတစ်ယောက်မှ မဖြစ်တဲ့အဆုံး စီးချင်းထိုးရန်ဆုံးဖြတ်၍ မိုက်မိုက်မဲမဲ တိုက်ခိုက်ကာ မိမိတို့ဘက်မှ ကျဆုံးပြီး အရှုံးဖြစ်ခဲ့ပါချေက ယခု တရုတ်ဘုရင်နှင့် ၄င်း၏ စစ်တပ်မှာ အင်းဝကိုရစေပြီး များမကြာခင် ငါ၏မွေးရာ နေပြည်တော် ဟံသာဝတီသို့ ဆက်လက် ချီတက် ၍ ယခုကဲ့သို့ပင် ထပ်မံ သိမ်းပိုက် မည်ချေမှာ မြေကြီး လက်ခတ် မလွဲနိုင်ချေ
(၄) အင်းဝ ကျဆုံးလျင် ဟံသာဝတီ ကျဆုံးလေမည်။။ အင်းဝနှင့် ဟံသာဝတီကျဆုံးလျင် အမျိုးဘာသာ သာသနာနှင့် ယဉ်ကျေးမှုများလဲ ကျဆုံးလေမည်
…အဆိုပါကျဆုံးမှုများဖြစ်လျင် လူမျိုးပါကျဆုံးပျောက်ကွယ် ကိစ္စတုံးလေတော့မည်ဟု တွေး၍ ကြိုမြင်ခဲ့လေ၏။
နောက်ဆုံးတွင် သတ်မှတ်ရက်အချိန်ရောက်ရန် (၃) ရက်သာလိုသော နေ့တွင် ငါကိုယ်တိုင် ၀င်တိုက်၍ စီးချင်းယှင်မှ ဖြစ်နိုင်တော့မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ကာ …”တရုတ်ဘုရင် သူရဲကောင်း ဂါမဏီက အဘယ်ကြောင့် ကြောက်ရမည်နည်း။
သူသည် ကောင်းကင်သို့ ပျံကြွတက်နိုင်သော နတ်မင်းကြီးလည်း မဟုတ်၍ငါ့အဖို့ကြောက်စရာမလို ၊ ဤ ဘူမိမြေပေါ်တွင် သူနှင့်ငါ ၀မ်းတစ်ထွာ အတူတူပဲမို့ သူသည် ငါ့လိုပင် လူသားဖြစ်၍ သူ့အားကြောက်စရာအရှင်းမရှိ၊ သူ့ကို ငါ နိုင်အောင် တိုက်ဝံ့ လှန်ဝံ့တယ်” ဟု ဆိုသောစကားဖြင့် အစောင့်များအား ဘုရင်မင်းခေါင်ထံ သံတော် ဆင့်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲလေသည်။
တရုတ်မှ မြန်မာသို့ အဆိုပါ ကျူးကျော်စစ်အား အတိုချုံးပြရသော် သူရဲကောင်းတစ်ယောက်၏ အရည်ချင်းများဖြစ်သော နှလုံးရည်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင် သမိန်ဗရမ်း၏ တိုင်းပြည်နှင့် အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ယဉ်ကျေးမှု စသော တန်ဘိုးထားစိတ်ဖြင့် ကာကွယ်လိုသော အသိတရားသည်၎င်း သူရဲကောင်း သမိန်ဗရမ်း၏ မွေးရာပါ အထုံပါရမီအရ လက်ဖျံရိုး တစ်ချောင်းသာပါသော ခန္ဓာကြံအင်ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး စစ်ပွဲအလီလီ နွဲလာဖူးသော စစ်ရေးဆိုင်ရာ တိုက်ခိုက်မှု စွမ်းရည်အရသော်၎င်း ရိုသားဖြောင့်မတ် တည်ကြည်သော ၄င်း၏ စိတ်သဘောထားမှာ နန်းစီးဇိမ်တ၀က် လက်ဆောင်ရာထူး ရမည်ဆိုသည်ထက် မိမိတို့ သူရဲကောင်းတို့ လုပ်ရမည်ဖြစ်သော ၀တ္တရားနှင့် သူရဲကောင်းတို့၏ ဂုဏ်အား ပြည့်ပြည့်၀၀ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဆိုသော ကောင်းမြတ်သည့် လက္ခဏာနှင့် စိတ်သဘောထားများကြောင့် တစ်ဖက်မှ ရန်မူလာသော တရုတ်ဘုရင်၏ သူရဲကောင်း စစ်ဘီလူး ဂါမဏိ၏ ခန္ဓာရင်အုံမှ နောက်ကျောသို့ သမိန်ဗရမ်း၏ လှံဖြင့် တံစို့ထိုးခဲ့စေပြီး အဆိုပါ စစ်ဘီလူးကြီး၏ ဦးခေါင်းအား မြေသို့မကျခင်မှပင် တိကနဲ့ဖြတ်တောက်ကာ မြေမနင်းသားအဖြစ် ဘုရင်မင်းခေါင်အား ဆက်သဦးတင်၍ အဆုံးစီရင်ခဲ့ကြောင်းပါ…………….
ယခုတွင် မြန်မာသူရဲကောင်းများ ကြက်စားရာ မြင်စိုင်း စစ်ကိုင်း အင်းဝ စသော ဒေသများတွင် ၀မ်ပေါင်တရုတ်အား သူခိုးဓားရိုးကမ်းပေးသော ဦးပိုင်မှ ခေါ်သွုင်းလာသည်ကို ဒေသခံများမှ ကျွဲနွားလူသူ များဖြင့် အံတုတင်းခံ ရင်ဆိုင်နေသည်မှာ (၃)နှစ်ကျော်ကျော်သို့ပင် ရောက်ရှိနေပြီး အဆိုပါအရေးအား ဖြေရှင်းရန်အတွက် သူရဲကောင်းတို့ ကြက်စားရာ နယ်မြေမှာ တရုတ်ဝမ်ပေါင် ကြေးနီခြံစည်းရိုး၏ အုပ်ဖိနပ်အောက် မရောက်စေရန် အလို့ငှာ သမိန်ဗရမ်းကဲ့သို့ သူရဲကောင်းများ လိုအပ်နေကြာင်းပါ ခင်ဗျာ…..
(၁) ဆရာ ဒေါက်တာ နိုင်ပန်းလှ၏ သမိန်ဗရမ်း အတွဲ(၁) (၂)
(၂) တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ပိကင်း နိုင်ငံရေးတက္ကသိုလ် အာရှရေးရာဌာနမှ ရှင်ချင်း ရေးသားသော (ပရင်တင်းခိရှ အနာကျန်း) ဆိုသည့် တရုတ်ပြည်သား အနော်ရထာ စသော စားတမ်းများ ကို ကိုးကားပါသည်။
စာဖတ်သူများ တောင်းဆိုပါလျင် သမိန်ဗရမ်းနှင့် ဂါမဏိတို့၏ စီးချင်း ထိုးသတ်ပွဲ အသေးစိတ်ကို ဆက်လက် တင်ပြပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါသည် ….နှစ်သက်လျင် သမိုင်းအမှန်မို့ လွတ်လပ်စွာရှယ်ယူနိုင်ပါသည်။
နေပြည်တော် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်အားလုံး ဖတ်နိုင်ရန် တင်ပြပေးခြင်းပါ
အထူးဖတ်သင့်သူမှာ(တပ်ချုပ်) မင်းအောင်လှိုင်နှင့် (ပြန်) ၀န်ကြီး ရဲထွဋ် ဖြစ်ပါသည်